Su'aalaha Waxbarashada Gaarka ah | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waxaan hadda taleefan ka soo wacay lataliyaha / macallinka ilmahayga oo sheegaya in ilmahayga loo gudbiyey kooxda daraasadda ilmaha. Waa maxay tan macnaheedu? Arrimahee noocee ah ayaa ku kicin kara macalinka inuu kula taliyo ardayga kooxda barashada ilmaha?
Ma ka qayb geli karaa kulankan "waxbarashada ilmaha"?
Haddii kooxdu go'aansato in qiimeynta waxbarashada khaaska ah ay lagama maarmaan tahay ma inaan oggolaansho siiyaa in qiimeyntan ay dhacdo?
Sideen ku ogaan karaa inay sameynayaan qiimeyn?
Haddii aan go'aansado inaan horay u sii wado qiimaynta, intee in le'eg ayay qaadanaysaa?
Maxay qiimeynta waxbarashada qaaska ahi u qaadataa muddo dheer?
Maxaa dhacaya marka baaritaanka la dhammeeyo?
Yuu imaan doonaa kulanka baaritaanka ka dib?
Maxay ka dhigan tahay in ilmahaygu "u qalmo adeegyada waxbarashada gaarka ah?"
Sidee ayuu u shaqeeyaa nidaamka waxbarashada gaarka ahi?
Maxay yihiin qaybaha kala duwan ee ardaygu u qalmi karo?
Ilmahaygu wuxuu soo maray qiimaynta waxbarashada gaarka ah laakiin umuu qalmin caawinta waxbarashada gaarka ah. Weli wuu dadaalayaa; wax kale ma jiraan?
Maxay ka dhigan tahay hubinta hanashada maskaxdu markay tahay xagga adeegyada ilmahayga?
Waa maxay qorshe 504?
Haddii ardaygaygu u-qalmo adeegyada mid ka mid ah meelaha kor ku xusan ee waxbarashada gaarka ah, adeeg noocee ah ayaan filayaa?
Maxay dhammaan xarfaha iyo xarfaha u taagan yihiin ee khuseeya Waxbarashada Gaarka ah?
Macallimiintu ma ogaan karaan meel gaar ah oo ay ka walaacsan yihiin, laakiin waxay jeclaan lahaayeen inay yeeshaan koox aqoonyahanno ku takhasusay barashada / dhaqanka (tan waxaa loogu yeeraa kooxda barashada cunugga) oo dib u eegis ku sameeya diiwaanada cunugaaga una soo jeediya talooyin iyaga ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loola shaqeyn karo ardayga ama sida qiimaynta waxbarashada gaarka ahi u noqon karto mid waxtar leh.
Haa, waa lagugu casuumi doonaa inaad ka soo qayb gasho kulanka si aad u maqashid tabashooyinka dugsiga oo aad ula wadaagto aqoontaada iyo / ama walwalkaaga. Looma baahna inaad ka soo qeyb gasho kulankaan laakiin xaqiiqdii waa la soo dhaweynayaa.
Xaqiiqdii. Macallimiintu waxay ardayga u gudbin karaan kooxda daraasadda ilmaha iyada oo aan oggolaansho laga helin waalidka laakiin ma jirto qiimeyn waxbarashadda khaaska ah oo dhici karta oggolaansho qoraal ah la'aanteed.
Go'aanka ku saabsan in la sii wado ama aan la sii wadin qiimeynta waxbarashada gaarka ah waxaa lagu gaarayaa kulanka kooxda daraasadda cunugga (oo aad ka soo qeyb geli kartaan). Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagugu casuumi doonaa inaad kaqeyb gasho kulan lagu go'aaminayo meelaha laga walaacsan yahay iyo imtixaanada ay tahay in la dhammaystiro Degmadu waxay codsan doontaa ogolaanshahaaga si ay u qiimeeyaan ilmahaaga. Foomka ogolaanshuhu ma tilmaamayo oo keliya aagagga la imtixaamayo, laakiin sidoo kale yaa samayn doona qiimeynta iyo gaar ahaan noocyada imtixaannada ay qaadanayaan.
Degmadu waxay leedahay 30 maalmood oo dugsi kadib markay hesho ogolaanshaha waalidka oo ay ku dhammaystiraan imtixaanka.
Waqtigaan waxaa go'aaminaya tilmaamaha Gobolka iyo Federaalka si loo siiyo dugsiyada waqti ku filan oo ay ku sameeyaan qiimeynta habboon ee baahida ilmahaaga. Waxaa jira tiro yar oo shaqaale ah oo uqalma inay sameeyaan imtixaanka qiimeynta waxbarashada gaarka ah. Imtixaanka ardayda ka sokow, shaqaalahan badankood waxay wataan cashar buuxa oo baris ah. Waxaa jira arday badan oo la qiimeeyo mid walbana wuxuu mudan yahay tixgelin aad u taxaddar leh.
Waxaa kula soo xiriiri doona maamule kiis kaas oo loo xilsaaray cunugaaga inta qiimeynta socoto. Qofkani wuxuu isku dubbaridi doonaa taariikhda iyo waqtiga aad imaan doontid si aad ugala hadasho natiijooyinka qiimeynta ilmahaaga.
Kulankan waxaa xubin ka noqon doona kooxda qiimeynta oo ay weheliyaan ugu yaraan hal macalin fasal, ugu yaraan hal waalid, iyo mararka qaarkood ardayga. Imaanshaha ardayga waxaa loo go'aamiyaa si shaqsi ahaaneed waana wicitaan xukun ee waalidka, maareeyaha kiiska loo xilsaaray inta lagu jiro howsha qiimeynta, iyo lataliyaha tacliinta ee cunuga. Guud ahaan, ardayda ku jirta dugsiga sare ama dugsiga sare waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka soo qayb galaan kulamadan.
Waaxda Waxbarashada ee Minnesota waxay soo saartay dhowr tilmaam oo loogu talagalay iskuulada inay raacaan markay qiimeynayaan carruurta laga yaabo inay leeyihiin baahiyo waxbarasho gaar ah. Tilmaamahan ama shuruudahaani waxay si gaar ah u muujinayaan nooca astaanta carruurtu u baahan tahay inay yeelato si ay ugu qalanto adeegyada waxbarashada gaarka ah ee aag kasta.
Meelaha hadda jira waa:
Horumarinta La Qabsiga Waxbarashada Jirka: Waxbarashada Gaarka ah
Naafonimada Aqoonta Koritaanka
Caruurnimada Hore: Waxbarashada Gaarka ah
Cilladaha xagga shucuurta ama dabeecadda ah
Naafanimada kale ee Caafimaadka
Jir ahaan Naafo
Aad U Dhimasho Badan
Naafonimada Barashada Gaarka ah
Hadal iyo Luuqad Dhimis
Dhaawaca Maskaxda ee Murugada Leh
Haa. Waxaa jira adeegyo badan oo kaladuwan oo laga heli karo "guud ahaan magaalada" taasoo laga yaabo inay kujiraan (waxay kuxirantahay iskuulka gaarka ah) hubaasha hanashada (AOM), "qorshe 504", umeerin faca, iwm.
Hubinta Mastery waa barnaamij bixiya edbinta xirfadaha dheeriga ah ee meelaha gaarka ah ee Ingiriisiga iyo / ama xisaabta. Ardayda waxaa loo gudbiyaa AOM si loo qiimeeyo si loo go'aansado haddii ay u baahan karaan taageerada noocan ah.
Qorshaha 504 ayaa ah dukumiinti qeexaya shuruudaha adeegyada waxbarida ee ardayga naafada ah ee u qalma taas oo si weyn u xadideysa waxqabadka nolosha ee weyn. Qorshaha waxaa ku jiri kara hoy, waxbarasho gaar ah iyo kaalmooyin la xiriira iyo adeegyo.
Tani waxay aad uguxirantahay baahida cunugaaga sida ku cad qiimeynta. Kadib marka lagu siiyo natiijooyinka qiimeynta ilmahaaga waxaa loo qoondeyn doonaa maareeye kiis inta ka dhiman sanad dugsiyeedka. Maamulaha kiiskan ayaa kula shaqeyn doona adiga si aad u soo saarto Qorshe Waxbarasho Shakhsiyeed ama (IEP) kaas oo qeexaya nooca saxda ah ee adeegyada uu ilmahaagu heli doono.
Soo dejiso liistada loo soo gaabsho ee Waxbarashada Gaarka ah ee loo isticmaalo.